သူခိုးသေဖော်ညှိစာမျိုးတွေ၊ ရေးသူ လူထုစိန်ဝင်း – Kyaw Kyaw Oo's Thoughts, Love and Hope
Posted on January 11, 2010February 19, 2010 by kyawkyawoo	Posted in မြန်မာရသစာပေTagged ခရစ္စမတ်နေ, ဆဋ္ဌမ သင်္ဂါယနာတင်ခဲ့တဲ့ မင်းတုန်းမင်းကြီး, ယဉ်ကျေးမှုတွေချင်း, လူထုစိန်ဝင်း, သူခိုးသေဖော်ညှိစာမျိုးတွေ, အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်, အနှိမ်ခံ၊ အဖိနှိပ်ခံေ, ဆောင်းရာသီ, မြန်မာ့ရသစာပေ, Myanmar Literature	ခရစ္စမတ်နေ့က ကျောင်းသားဟောင်း တစ်ယောက်လာပြီး ဆုတောင်း မေတ္တာပို့ ပါတယ်။ ရှပ်အင်္ကျီနဲ့ ပုဆိုး အပြင် ခုခေတ် မြို့ပြရဲ့ ပြယုဂ်ဘူးစုံ ပုလင်းစုံခြင်း ကလည်း ပါသေးတယ်။ နက်စ်ကော်ဖီ၊ တူတံဆိပ် ထောပတ်၊ ခရတ်ဖ်ချိစ်၊ စပရိုက်စတာ တွေအပြင် အာလူးကြော်ဘူး၊ နာနတ်ယိုဘူး၊ လိုက်ချီးဘူး ဆိုတာတွေလည်း ပါတယ်။ စုံနေတာပါပဲ။ တပည့်ဟောင်းကို တွေ့ရလို့ ၀မ်းသာရတယ်။ သူယူလာတဲ့ ပစ္စည်းတွေ အတွက်တော့ ထူးထူး ခြားခြား ခံစားမှုမဖြစ်ပါဘူး။
ဒါနဲ့တောင် လူတွေက အနောက်က အရာမှန်သမျကို ဘာကြောင့်များ ကောင်းလှချည့်ရဲ့ ဆိုပြီး ခေါင်းပေါ် တင်ထားချင် နေကြတာလဲ။ အနောက်က လူတွေပြောသမျ စကားလုံးတိုင်း စာကြောင်းတိုင်းကို ဘာကြောင့်များ အဖိုးမဖြတ်နိုင်အောင် တန်ဖိုးရှိလှ ပါပေတယ်လို့ ပြောနေကြတာလဲ။ သူတို့နိုင်ငံမှာ ယဉ်ကျေးမှုတွေချင်း ထိပ်တိုက်တိုး နေကြတာနဲ့ပဲ ဒီမှာလည်း ထိပ်တိုက်တိုးစရာလား။ ဒီမှာက ဆဋ္ဌမ သင်္ဂါယနာတင်ခဲ့တဲ့ မင်းတုန်းမင်းကြီးကတောင် အမေရိကန် သာသနာပြုတွေ အတွက် ကျောင်းဆောက် ပေးခဲ့သလို အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်တွေ အတွက်လည်း ၀တ်ပြုစရာ ပလီဝတ်ကျောင်း ဆောက်လုပ် လှူဒါန်းခဲ့တာပါ။ ပြည်ကြီး(တရုတ်) က၀င်လာသူတွေ၊ မူလွတ် (အိန္ဒိယ) ကရောက်လာတဲ့ သူတွေနဲ့လည်း ဆွေလိုမျိုး လိုနေခဲ့ကြတာ နှစ်ပေါင်း ရာချီ ကြာခဲ့ပါပြီ။ ဘာယဉ်ကျေးမှုတွေမှ ထိပ်တိုက် မတိုးခဲ့ဖူးပါဘူး။ သူတို့ဆီမှာကတော့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှိရှိသမျ လူမျိုးတစ်ရာ့ တစ်ပါးနဲ့ ဒေသခံတွေက အရေအတွက် အားဖြင့် ‘ပိန်မသာ လိန်မသာ’ ရှိနေကြရာမှာ မဟာလူဖြူတွေက အသားမဖြူတဲ့ လူတွေဆိုရင် ဘယ်သူ့မဆို ဒုတိယတန်းစား လူမျိုးတွေလို့ ရှုမြင်ထား ကြလေတော့ ပြဿနာကြီးတွေ မဖြစ်ဘဲ နေပါတော့မလား။
လူမည်းတွေ လူညိုလူဝါတွေ ကရောက်စတော့ လူနည်းစုမို့ ငုံ့ခံနေကြရတာ ဖြစ်တယ်။ နောင်နှစ် တွေကြာပြီး ကိုယ့်အင်အားက များသထက်များ လာကြတဲ့အခါ ကောင်းကောင်း ပြန်အစွမ်းပြကြတယ်လေ။ ဒီတော့ ပြဿနာတွေက ပဋိပက္ခတွေဖြစ်၊ နောက်တစ်ဆင့် တက်တော့ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေးနဲ့ ရန်ပွဲကြီး ရန်ပွဲငယ်တွေအထိ ဖြစ်လာကြရ တော့တာပါပဲ။ ဒါကို ယဉ်ကျေးမှုချင်း ထိပ်တိုက် တိုးတာလို့ ပြောတာပါ။ တကယ်က ယဉ်ကျေးမှုချင်း ထိပ်တိုက်တိုးတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကာလ ရှည်ကြာစွာ အနှိမ်ခံ၊ အဖိနှိပ်ခံ နေရာမှာ နေခဲ့ကြရသူတွေက ဗိုလ်ကျ မောက်မာ ဖိနှိပ်သူတွေကို တူညီတဲ့နည်းနဲ့ လက်တုံ့ ပြန်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အနောက်ဖက်နဲ့ အနောက် မြောက်ဘက် တောကြီး မျက်မည်း ဒေသတွေ ဖြတ်ပြီး ရထားလမ်း ဖောက်ဖို့ ကျွန်ကုန်ကူး သူတွေဆီက တစ်ဆင့် ခေါ်ယူခဲ့တဲ့ တရုတ် လူမျိုးတွေကို ဘယ်လိုထားပြီး ဘယ်လို ခိုင်းခဲ့ကြသလဲ။ ကြာပွတ်နဲ့ တရွှမ်းရွှမ်း ရိုက်ပြီး ရောမခေတ်က ကျွန်တွေကို ဆက်ဆံသလို ဆက်ဆံခဲ့ကြတာပဲ မဟုတ်လား။ နောက်ဆုံးကျတော့ ရောမခေတ်မှာ ‘စပါးတကပ်’တို့ တုံ့ပြန်ခဲ့သလို တုံ့ပြန်ခဲ့ကြတာပါ။ ဘာယဉ်ကျေးမှုခြင်း ထိပ်တိုက် တိုးခြင်းမှ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒီလိုတုံ့ပြန်မှုတွေကို သေးသိမ်အောင် မဟာ ကော်ပိုရေးရှင်းကြီးများရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေက ဘာမှမဟုတ်တဲ့ ယဉ်ကျေးမှုချင်း ထိပ်တိုက် တိုးမှုအဖြစ် ရေးသား ၀ါဒဖြန့်နေကြတာ ဖြစ်တယ်။ အဲဒီ ၀ါဒဖြန့်ချိ ချက်တွေကို ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ပြည်တွင်းမှာ တစ်ဆင့် ၀ါဒဖြန့်ချိ ပေးနေတယ် ဆိုတာ သိသာပါတယ်။ ကမ္ဘာကြီးကြောင်းကို မြန်မာတွေ သိစေချင်လို့ ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက် ခိုင်မာစေဖို့ ၊ တော့ဖလာတို့၊ ပီတာဒရပ်ကားတို့၊ ဖူကူးယားမတို့၊ ဟန်တင်ထန်တို့၊ စတစ်ဂလစ် တို့လိုဘဲ ထင်ရှား ကျော်ကြားတဲ့ နှုံးချွမ်စကီးတို့ အက်ဒ၀ပ်ဆာအစ်တို့ ဖီလန်ကွန်ဒဲရားတို့ ဂျွန်ပီးစ်ဂါးတို့လို ပါမောက္ခကြီးတွေရဲ့ စာအုပ် တွေလည်း ဘာကြောင့် ဘာသာ မပြန်ကြတာလဲ။ မဟာ ကော်ပိုရေးရှင်း ကြီးတွေ ကြီးစိုးတဲ့ စနစ်ကြီးရဲ့ သရုပ်မှန်ကို အမှန်အတိုင်း ခွဲခြမ်း စိတ်ဖြာထားတဲ့ စာမျိုးတွေ ဖြစ်နေလို့ မဟုတ်ဘူးလား။ ဘယ်သူမဆို ကိုယ်ရေး ချင်တာ ရေးခွင့်ရှိပါတယ်။ ကိုယ်ဝါဒ ဖြန့်ချင်တာ ဖြန့်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ဟာကို ရိုးရိုး သားသား လုပ်ပါ။ ဒါပေမယ့် မြန်မာတွေ ကြားဖူးစေချင်လို့၊ ဖတ်ဖူးစေချင်လို့၊ ဗဟုသုတ ရှိစေချင်လို့ ဆိုတဲ့ စေတနာ ယောင်ဆောင် “သူခိုး သေဖော်ညှိ” စကားတွေနဲ့တော့ လူတွေကို မလှည့်စားပါနဲ့။ အဲဒီ စကားတွေဟာ လူတွေ အားလုံးကို သိမ်းကျုံးပြီး နလဗိန်းတုံးတွေမို့ ပညာပေး နေရတာလို့ ပြောလိုက် တာနဲ့ အတူတူပါပဲ။
Copied from Maya Online/ Original Post from Weekly Eleven Journal , Jan6Rate this:Share this:FacebookTwitterPrintEmailLike this:Like Loading...
Movie Avatar is all about love, humanity and justiceDo you (really) believe in ‘Allah’? Md. Asham Ahmad( Malaysia Insider)